Ihlokondiba: +86 13013230888
Inombolo yomnxeba: +86 13013230888
Isinyithi esingafaniyo kunye neembiza zentsimbi ezifakwe kwisinyithi zilungele ukupheka
Sebenzisa izixhobo ezifanelekileyo kunokwenza indalo yakho yokupheka ibengcono. Izinto ezisetyenzisiweyo kwizixhobo zokupheka ziya kuchaphazela yonke imiba yezitya ozilungiselelayo-nangona kulula ukubamba imbiza yokuqala ohlangana nayo xa ulungiselela isidlo sangokuhlwa okanye ukubhaka iidessert, ukukhetha imbiza elungileyo kunoku ...
Phosa ipani yentsimbi okanye ipani engeyoyentonga: yeyiphi engcono?
Nokuba ungumpheki oqhelekileyo okanye umpheki oqeqeshiweyo, ngokuqinisekileyo ufuna ipani yokuphekela ekhitshini. Unokwenza phantse nayiphi na into ngepani yokutshiza, ukusuka kumaqanda aqhekeziweyo ukuya kwii-steaks ezosiweyo kwisonka sombona kunye nokunye. Xa uthenga ipani yokuqhotsa, kungafuneka ukhethe phakathi kwe-classic cast iro ...
eyona bakeware ibalaseleyo yokugcoba ngaphakathi
Ukubhabha yindlela entle yokwenza isidlo sangokuhlwa esilula, kodwa ukuba uhlala kwindlu encinci okanye imozulu imbi, ukupheka ngaphandle kunokuba ngumceli mngeni. Kulapho kungena i-bakeware. Inkangeleko yale mpheki iyafana naleyo yokutya ngaphakathi, kunye nephunga elitshisiweyo nelokutshaya, ke akukho ...
Iimbiza ze-Sanxia kunye neepani zibonisa kumboniso wesipho waseShenzhen
Ukusukela nge-25 ka-Epreli ukuya kwi-28, i-29th China (Shenzhen) Izipho zaMazwe ngaMazwe kunye nemiboniso yeemveliso zasekhaya zabanjelwa e-Shenzhen International Convention kunye neZiko leMiboniso. I-Sanxia, ​​njenge-drafter yemigangatho yesigqeba semveliso ye-China yensimbi yensimbi, ikwindawo yokuqala phakathi kwezona zilishumi ...
I-Sanxia ilebhu yayo iphumelele ukuvunywa kwesiqinisekiso se-CNAS
Nge-14 ka-Okthobha i-2020, ilabhoratri kaSanxia iphumelele ukuvunywa kwesiqinisekiso se "China National Accreditation Service for conformity assessment" (CNAs), kwaye ngokuzimeleyo inokuqhuba ukuvavanywa kokuhambelana kwe-cast iron enamel kitchenware. Ukusukela ngoko, iSanxia kitchenware ine b ...
Umboniso weShanghai “weSebe levenkile” iSANXIA ibonisa amandla amakhulu ngeemveliso ezintsha
NgoJulayi 23, 2020, i-114th China Fair yokuthengisa ngokuthe ngqo (i-CME) yasungulwa ngokusemthethweni eShanghai New International Expo Centre. I-Sanxia ivele kulo mboniso, kwaye nophawu lwayo "Rockwell" kunye ne "Sanxia" iimveliso ezininzi, yabonisa abathengi besiza i-enterpri ...
I-Iron Iron Skillet, uNamel Skillet, i-Cast yentsimbi enqabileyo, Isinyithi se Iron Iron, xtreme Iron Skillet, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets,